दीनहीनताबाट मुक्त सम्बृद्धिको प्रतीक बनोस् दीपावली !
सूर्य जब अस्ताउँदछ, चन्द्रमा पनि जब लुकिसकेको हुन्छ तिनकै सहारामा प्रकाशित र शीतल प्रकाश पाउने पृथ्वीमा गहन अन्धकार छाउँन थाल्छ । अनि यस पृथ्वीका बासिन्दा मानिसले एउटा दीप बत्ती बालेर के सावित गर्न खोज्दछ भने उसको जीजीबिषा यत्तिको प्रवल छ कि उसले तमाम बिषम परिस्थितिसँग जुध्ने हौसला राखेको छ । अध्याँरो जतिसुकै निष्पट्ट किन नहोस् उसले रिमरिम मधुरो उज्यालोमा नै भए पनि आशा र अपेक्षाको दीयो बालेको छ । मानिसको यही दृढ इच्छाशक्तिको अप्रतिम प्रतीक हो वास्तबमा दीपावली पर्व !
त्यसो त हरेक आमाबश्यको रात कालरात्री नै हुन्छ र मानिसले शुक्ल पक्ष प्रारम्भ हुने चन्द्रमा उदयको दिन–जुन क्रमश बढेर पूर्ण हुन्छ र पूर्णिमा बन्छ–को खोजी गरिरहेको हुन्छ । तर दीपावली अर्थात् कार्तिक अमाबश्यका दिन यत्तिको उज्यालो फैलाइन्छ कि शायद सूर्य र चन्द्रमा पनि त्यो देखेर आश्चर्यमा पर्दा होलान् !
बास्तवमा कुरा प्रतीकात्मक छ । तर सत्यभन्दा धेरै भिन्न छैन । किनभने यसको मनोभावार्थ सबै किसिमका अमानबीय, अँध्यारा, काला कामहरु — शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार, कालाबजारी, तस्करी,हत्या,हिंसा, अन्याय आदि जस्ता काला कामहरु हटाउने र उज्याला कामहरु अगाडि ल्याउने दीपावली वास्तवमा तिमिर अन्धकारमाथि प्रकाशको बिजयको प्रतीकको एउटा पर्व हो भनेमा अत्युक्ति नहोला ।
यद्यपि दीपावलीलाई लिएर बिभिन्न किसिमका पौराणिक कथाहरु जोडिएर आएका छन् र तिनका आफ्ना आफ्नै सुविधा तथा आनन्द अनुरुप बेग्लाबेग्लै अर्थ लगाइदै पनि आएको छ । तर पुराणको कुरालाई पञ्छाएर यथार्थ जीवनको तहमा उत्रिदा कथा कस्तो हुनसक्छ भने कयौं महिनाको अथक परिश्रम पछि जब किसानको बालीनाली भित्रिने बेला हुन्छ या भित्रिसकेको हुन्छ त्यति बेला केही समय बिश्रान्ति लिने खुशीयाली या हर्षोल्लासका लागि पनि किसानले निकाल्ने गर्दछन् । त्यो खुशीको उज्यालोका लागि अन्धकार बाधक बन्दछ र त्यत्ति बेला दीपदानीहरु लहरै बालेर अन्धकारको बाधा हटाउने प्रयत्न गरिन्छ । अर्थात् किसानले अन्धकारको बिरुद्ध लड्ने सीप दर्शाउँदछन् ।
तर आजभोली कस्तो हुन थालेको छ भने समयको परिवर्तनसँगसँगै दीपावली पर्व, त्यसको उदेश्य, त्यसको सार्थकता पनि बच्न सकेको छैन अर्थात् लोप हुँदै गइरहेको छ । खेती किसानी जस्ता शब्दहरु किसानहरु जस्तै मूख्य धाराबाटबाट बाहिर निस्किसकेको छ र अनाकर्ष र किनारामा परिसकेको छ । त्यसैले दीपावली आजभोली दीपदानीहरुको होइन बिजुलीका बल्वहरुको पर्व हुन थालेको या भइसकेको छ । त्यसले गर्दा जोसँग बिजुली छ १४ घण्टा बिद्यूत आपूर्ति हुन्छ र बिद्यूत काटिएको बेलामा पनि डिजेलको सहयोगले जेनेरेटरबाट बिद्यूतीय प्रकाश निकाल्ने क्षमता हुन्छ आज दीपावली तिनकै हुँदै गएको या भएको छ ।बाँकी जन साधारणका लागि भने त्यो रमिता हेर्ने बिषय बस्तु मात्र बन्छ या बन्दै गएको छ । वास्तवमा आधुनिक दीप पर्वमा केवल बिजलीका बल्बहरुको मात्र होइन बजाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ । पहिला पहिला साधारण किसानले आफुसँग बाँकी बचेको थोरैतिनो अन्नपात बेच्ने गर्दथे र जेजति आय हुन्थ्यो त्यसबाट थोरै खुशी मनाउने गर्दथे । तर अब त न अन्नपात नै त्यत्ति हुन्छ न बिक्री गरेर आय कमाउने कुरा नै त्यस्तो धेरै छ । त्यसैले दीपावली र लक्ष्मी पूजामा अब एक किसिमले सम्पन्न र ठूला ब्यापारीहरुको एकाधिकार बन्न गएको छ ।
आज त जो जति ठूलो ‘लक्ष्मीपति’ छ उसको लक्ष्मीपूजा त्यत्ति नै शानदार, उसका लेनदेनका उपहारहरु पनि त्यत्तिनै गहकिला र त्यत्तिकै तिनको किनबेच पनि चल्ने गरेको देखिन्छ । बाँकी बहुसंख्यक जनता त तिनै थोरै सम्पन्नहरुको शानमान हेर्ने गर्दछन् र दीपावली ( धनकी देबी लक्ष्मी — को पर्व मनाउने गर्दछन् । आज यो किसानको साधारण जीजीबिषाको पर्व दीपावली धर्मान्धता, राजनीति, ब्यापार, बजार आदिको चक्रब्यूहमा परेर घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ । यस चक्रब्यूहको घेराले गर्दा आम जन सधारणको जीवनमा अँध्यारो गाढा हुँदै गएको छ । अब यस अन्धकारलाई चिर्ने दीपाबलीले मात्र जन साधारणको सुन्दर जीवन र सुखद भबिष्यको उज्यालको आशा र भरोसा गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले, आजका नेपाली जन साधारणले केवल दीपावलीका दिन साझमा बत्ती बालेर अन्धकार हटाउने र आफ्नो जीजीबिषा दर्शाउने मात्रै होइन, यो जुन अँध्यारो चक्रब्यूह छ त्यसको भेदन गरेर सुन्दर र समृद्ध जीवनका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सबै क्षेत्रका अँध्यारा पक्षलाई सदाका निम्ति हटाएर अघि बढ्ने हौसला देखाउनु सक्नु पर्दछ । यसरी यसले के सावित गरिनु पर्दछ भने समाजका चाड पर्वहरु सबैका लागि खुशी, आनन्दका र उत्साहका निमित्त हुन् । त्यसैले,रोग, भोक, गरीबी, अभाब, शोषण, उत्पीडन सबै किसिमका बिघ्न बाधा र अप्ठयाराहरुलाई पञ्छाउँदै शतत उज्यालो जीवनका लागि अघि बढ्न आबश्यक छ । शुभ दीपावलीले यही यथार्थलाई घर घरमा पु¥याओस् र सबैतिर उज्यालो पार्ने बाटो खोल्ने आत्मचिन्तन छाओस् । यसैका निमित्त सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी र दाजुभाइहरुमा शुभ दीपावलीको मंगलमय शुभकामना !